टिप्स Archives - Page 10 of 11 - Technology Khabar
» टिप्स » Page 10
काठमाडौं । आजभोली हरेक मानिस इन्टरनेटमा जोडिएका हुन्छन् । जति धेरै इन्टरनेटको प्रयोग बढछ त्यति नै साइबर अपराधको प्रभावमा आउने संभावना बढिरहन्छ । केहि समय पहिले साइबर सेक्यूरिटी फर्म बराक्यूडा […]
वाईफाईको पासवर्ड बाँडेर दिक्क हुनुभयो ? यसरी सजिलो तरीकाले गर्नुस् वाईफाई शेयर
काठमाडौं । आजकाल इन्टरनेटको आवश्यकता करिब करिब हरेक समय हुन्छ । इन्टरनेटको उपयोग हामी यात्रागरिरहेको बेलादेखि कार्यालयको कामसम्म लगभग हरेक समय गर्ने गर्दछौं । अधिकांश समय हामी इन्टरनेटको प्रयोग आफ्नो […]
काठमाडौं । के तपाईँ पटक पटक आफ्नो स्मार्टफोन चेक गर्ने गर्नुहुन्छ ? अथवा यदि तपाईँको फोनको ब्याट्री कम हुँदा वा फोनको नेटवर्क नहुँदा तपाईँलाई समस्या भएको अनुभव गर्नुहुन्छ ? यदि […]
काठमाडौं । हामीमध्ये अधिकांश निशुल्क वाई-फाई भेटिएमा त्यो प्रयोग गर्न थालिहाल्छौं । तर यो हाम्रो लागि खतराजनक हुनसक्दछ किनकी यदि सही तरिकाबाट कन्फिगर न गरेमा ह्याकर्सले सजिलैसँग वाईफाई राउटर्सलाई नियन्त्रणमा […]
काठमाडौं । यो वर्षको मनसुन शुरु भएको निकै दिन भएपनि वर्षाको अनुभुति हुने दिनहरु शुरु भईसकेको छ । मानिसहरु वर्षासँगै गर्मीबाट मुक्त भईयो भनेर आनन्द मानिरहेका छन् । तर यसबिचमा […]
काठमाडौं । आजकाल हरेक मानिसहरु मोबाइलमा इन्टरनेट प्रयोग गर्ने गर्दछन् । तर केहि यस्ता कामहरु हुन्छन जसलाई केबल ल्यापटपमा मात्र गर्न सकिन्छ । अझ ल्यापटपमा मात्र गर्न सकिने काम र […]
काठमाडौं । स्मार्टफोन बेला बेलामा ह्यांग हुने वा तात्ने समस्याबाट धेरै प्रयोगकर्ताहरु हैरान हुने गर्दछन् । अधिक प्रयोग र त्यसको क्षमताभन्दा बढि एप्स डाउनलोड लगायतका कारणले यस्तो हुने गर्दछ। यो […]
काठमाडौं । मोबाइल फोन कम्पनीहरुले बजारमा नयाँ नयाँ स्मार्टफोन सार्वजनिक गरेसँगै ग्राहकहरुले पनि आफ्नो पुरानो स्मार्टफोन छोडेर नयाँ किन्ने हतार हुन्छ । पुरानो फोनभन्दा नयाँ स्मार्टफोनहरुमा अधिक फीचर, सुविधा र […]
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले पछिल्लो समयमा विद्यार्थीहरुलाई आकर्षित गर्न विशेष छुट सहितको सिम उपलब्ध गराईरहेको छ । कम्पनीले दिने विद्यार्थी अफर अन्तर्गतको सिम विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयमा पढिरहेका विद्यार्थीहरुले प्रयोग गर्न सक्नेछन्। […]
काठमाडौं । मोबाइल फोनमा मानिसहरु व्यस्त हुन थालेसँगै विभिन्न किसिमको डाटा चोरी र ह्याकिंगको विषयपनि बढिरहेको छ । मानिसहरु मोबाइल नियमित प्रयोग गरेपनि कसरी त्यसको सुरक्षा गर्ने भन्ने विषयमा भने […]
काठमाडौं । कयौं पटक आइफोनप्रयोगकर्ताहरुले आफ्नो पासवर्ड बिर्सने गर्दछन् । तर त्यस्तो बेलामा तपाईँको फोन लक खोल्न समस्या हुने गर्दछ भने जतिगरेपनि पासवर्ड मिल्दैन् । यस्तो बेलामा फोनलाई अनलक गर्न […]
काठमाडौं । तपाईं फोनमा केही द्रुत काम गर्दै हुनुहुन्छ र अचानक तपाईंको सिग्नल हराउँछ वा डेटा कनेक्सन अचानक बन्द हुन्छ। त्यसबेला तपाई कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ ? पक्कैपनि तपाईँलाई रिस उठ्नेछ […]
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले आफ्नै मोबाइल नेटवर्कमा कुराकानी गर्ने ग्राहकहरुका लागि भनेर छुटै सेवा संचालन गरिरहेको छ । यो सेवा अन्तरगत विभिन्न ५ वटा मोबाइल नम्बरमा सस्तो दरमा नियमित कुराकानी […]
काठमाडौं । फागु पूर्णिमा अर्थात होली पर्व । यो दिनलाई रंगहरुको उत्सव भने चिनिन्छ । जसमा रंग र पानीको निकै प्रयोग हुने गर्दछ । तर होली खेल्दा आफ्नो महत्वपूर्ण डिभाइस/मोबाइल […]
तपाईँको एन्ड्रोयड स्मार्टफोन लक भयो ? यी तरिका अपनाएर अनलक गर्नुस्
काठमाडौं । स्मार्टफोन हरेक प्रयोगकर्ताहरुको कामलाई सहज बनाउन प्रयोग हुने गर्दछ तर कहिलेकाँही यसले समस्या पनि सिर्जना गर्दछ । स्मार्टफोनमा विभिन्न किसिमका एप्स डाउनलोड गरेर प्रयोग गर्नेगर्दा कहिलेकाँही तपाईँको स्मार्टफोन […]
काठमाडौं । बाइक, गाडी वा स्कूटरलगायतका सवारीधनीहरुलाई कतै आफ्नो सवारी साधन चोरी हुने होकी भनेर चिन्ता लागि रहन्छ । हरेक दिन सवारी साधन अझ मोटरसाइकल तथा स्कूटर चोरी भईरहेको समाचार […]
काठमाडौं । के तपाईँको स्मार्टफोन स्लो भएको छ र यहि कारणले सँधै समस्या आएको छ । यदि त्यसो हो भने तपाईँले केहि सामान्य काम गर्नुहोस् जसले स्लो भएको स्मार्टफोनलाई फेरी […]
काठमाडौँ । पछिल्ला दिनहरुमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले इन्टरनेट तथा मोबाइल बैंकिंग सेवा दिँदै आएका छन् । अधिकांश मानिसहरु बैंक तथा वित्तिय संस्थामा लाग्ने लामो लाइनबाट मुक्ति पाउन इन्टरनेट तथा […]
काठमाडौँ । आजभोली हरेक स्मार्टफोन यूजर्सले आफ्नो मोबाइल फोनमा मेमोरी कार्डको प्रयोग गर्ने गर्दछन् । यसमा यूजर्सले आफ्नो फोनमा निजी फोटोहरु, भिडियोहरु समेत विभिन्न डकुमेन्टहरु सुरक्षित गरेका हुन्छन् । तर […]
काठमाडौँ । स्मार्टफोनमा सिग्नल नहुने वा कुराकानी हुँदै गर्दा फोन काटिने समस्या अधिकांशले भोग्दै आएका हुन् । यस्तो कारणले गर्दा कल ड्रप हुने, इन्टरनेटको स्पीड स्लो हुने, खराव भ्वाइस क्वालिटी […]
काठमाडौँ । स्मार्टफोन ब्लास्ट हुने विभिन्न घट्नाहरु बाहिर आईरहेका छन् । विभिन्न ब्राण्डका स्मार्टफोनहरु चार्जिंगको समयमा आगो लागने र जल्ने समस्याहरु देखिएका छन् । स्मार्टफोन पड्किएर मानिसको नै मृत्यु भएको […]
काठमाडौँ । एन्ड्रोयड स्मार्टफोनका यूजर्सले आफ्नो व्यक्तिगत जानकारी तथा डेटाहरु सुरक्षित गर्न पासवर्ड, प्याटर्न, स्क्रीन लक, फिंगरप्रिन्ट सेन्सरलगायतका सेक्योरिटी फीचरको प्रयोग गर्ने गर्दछन् । स्मार्टफोन अन्य व्यक्तिहरुले नचलाउन र निजी […]
काठमाडौं । विश्वमा स्मार्टफोनपछि ल्यापटप दैनिक प्रयोगको रुपमा आउने गरेको छ । कलेजमा प्रोजेक्ट बनाउने काममा होस वा व्यवसाय वा अफिसको कामका लागि ल्यापटप अनिवार्य जस्तै भईसकेको छ । यस्तो […]